Kugara neInvestment yeFrance uye Golden Visa
● Kugara nekudyara kweFrance nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muFrance uye Magweta e Kugara patsva neInvestment muFrance uye broker kune real estate Residency zvirongwa muFrance zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Kugara nevemaInvestment vamiririri veFrance kunopa mabasa ekugara nekudyara muFrance, Residency nezvirongwa zvekudyara muFrance, Residency nehurongwa hwekudyara muFrance, yechipiri Residency nekudyara muFrance, mbiri Residency nekudyara muFrance, ugari uye ugari nekudyara muFrance. , Kugara zvachose nekudyara muFrance, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muFrance, Kugara nehurongwa hwekudyara muFrance, Kugara nehurongwa hwekudyara muFrance, Citizenship nekudyara muFrance, Citizenship nezvirongwa zvekudyara muFrance, Citizenship nehurongwa hwekudyara muFrance, wechipiri Citizenship nekudyara muFrance, hunyambiri Citizenship nekudyara muFrance, pekugara uye ugari nekudyara muFrance, kugara uye ugari nekudyara muFrance, hupfumi Citizenship zvirongwa muFrance, Citizenship neinvestment scheme muFrance, Citizenship nezvirongwa zvekudyara muFrance, chechipiri pasipoti muFrance, yechipiri mapasipoti zvirongwa muFrance , yechipiri pasipoti chirongwa muFrance, mbiri yechipiri pasipoti muFrance, pekugara uye yechipiri pasipoti muFrance, diplomatic yechipiri pasipoti muFrance, yechipiri pasipoti nekudyara muFrance, yechipiri ugari pasipoti muFrance, yechipiri pasipoti chirongwa muFrance, chechipiri pasipoti zvirongwa muFrance , visa yegoridhe muFrance, vhiza dzegoridhe muFrance, zvirongwa zvendarama zvevisa muFrance, vhiza yegoridhe visa muFrance, yechipiri vhiza yegoridhe muFrance, yechipiri vhiza vhiza chirongwa muFrance, mbiri yegoridhe visa muFrance, ugari uye visa yegoridhe muFrance, kugara uye vhiza yegoridhe muFrance, mugari vhiza mugari muFrance, dhiza vhiza scheme muFrance, goridhe vhiza zvirongwa muFrance.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muFrance nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muFrance yeResidency nekudyara: EUR 10,000,000
Nhanganyaya France ne Residency neInvestment
France ndiyo imwe yenyika dzinodakadza uye dzakanatswa muEurope. Anoshamisa mhepo, zvikafu zvinokatyamadza, uye hunhu kupinza mukati. Pane mukana wekuti mukana wekuona iyo Eiffel Tower zuva rega rega uye nekusangana neinotapira zvinonaka waini chete 3 euro / bhodhoro hazvina kukwana kwete, heano zvimwezve zvimwe zvikonzero zvinoita kuti kugara muFrance kuve kunoshamisa. Kunyangwe iyo maawa makumi matatu neshanu evhiki iri, kunyangwe, ingano, kupfuura chaicho, maFrance vanoziva maitiro ekuchengetedza hupenyu hwakaringana / basa rakaringana. Chimwe chikonzero chekuvhara mashopu nehutongi na35 manheru zvakanyanyisa, ndechekuti vashandi vakoshese chirariro nemhuri vadzoka kumba.
Zvimwe zvakwakanakira: chikafu cheawa imwe chete, chinowanzobhadharwa nesangano semabiko emakirabhu kune epedyo kwazvo. Zvakare, zvechokwadi, hapana chinotyisa kuva negirazi rewaini nechikafu chako uye kudzokera kubhizinesi mushure. VaFrance vane mazuva makumi matatu ekushanya kwakabhadharwa, vachitanga kuunganidza kana vangowana basa. Pamusoro pezvo, ivo vanoteerera mafambiro uye vanoenda kuburikidza neese emazuva makumi matatu kunze kwenzvimbo yebasa gore rega rega asi vachiri kunzwa kuenda-kunorambidzwa gore risati rapfuura. Zvakare, pasina nzira, chimiro kana fomu, usaronge kuita kuti zvinhu zviitwe muna Nyamavhuvhu! Iwe unozogadziriswazve kutanga neumwe autoresponder wobva waenda kunotevera Chokwadi, munhu wese anowedzerwa kuenda-kure, achinyatsopwanya zuva imwe nzvimbo kuNorthern Corsica.
Mutemo weFrance unorambidza vamiririri kubva kubhurawuza mameseji ebasa mushure mechitanhatu wakagadzira zvakanyanya pawebhu. Kunyangwe yaifungidzirwa zvisirizvo, haufanire kufungidzira kuti vaunoperekedza veFrance vanofanirwa kuwanikwa vekunze kune yavo yekushanda nguva. VaFrance inyanzvi mukudzima basa uye vanosarudza kuisa simba ravo remahara kunze - kukwira, kayaking kana kuita zvekushanya munyika yakavhurika. Iwe unogona kuwana yako BA kana BS ye € 6 chete (181 $) gore rega uye wosarudza bvunzo dzekupedza kudzidza kwe € 225 (250 $) pagore! Kugadzira zvikoro ndeye smidgen inodhura kwazvo nemari yegore rega redzidzo ye € 310 uye kuwana Ph.D. muFrance inokubhadharira € 596 yenguva yega yega yezvidzidzo. Yunivhesiti yakazvimiririra (funga mutemo uye zvikoro zvekiriniki) zvinodhura zvakanyanya, zvakadaro, zvichiri zvine mwero nemari inodhura kubva ku € 380 kuenda ku € 3.000 gore rega.
Pamusoro pezvo, pane mutoro wakakura wezvipo unowanikwa kune vasina kujaira vadzidzi kuti vakubatsire iwe nekuvanza yako yekugara mari. Pasina kuenda pamusoro pebhodhi, iwe unogona kuve neakakura understudy kwenguva yakareba muFrance, uchishandisa zvakapoteredza 700-800 € mwedzi wega wega kusanganisira zvese.
Mahombekombe egungwa angada kukoshesa zuva chero kupi zvakatenderedza Cote d'Azur (uye zvakavanzika zvichida kusangana nemumwe munhu anozivikanwa). Chokwadi, iwo anodziya mvura pano ndeaya akaenzana turquoise shading iwe yaunoona mumifananidzo. Kana zvekare zvakare zvirinani, rova ​​kuCorsica ino nguva yekupedzisira yechirimo - yakavharirwa mhenderekedzo yegungwa uye makomo akashata munzvimbo yepabhodhi. Mhenderekedzo yegungwa pano iri nani kwazvo kupfuura kuFrench Reverie uye ini ndinonyatsoratidza kuita dhirivhari kutenderedza chitsuwa kumisangano yakanakisa yemhepo! Dombo guru rejecha muEurope - Dune rePilat rinongova 60km kubva kuBordeaux. Masosi eIcy - ndizvozvo, kune manomwe anowanikwa muFrance. Kuda kuve nesimba pane nzendo? Zvakadii nezvekayaking muGorges du Tarn kana kukwira kwakatenderedza Gorges du Verdon - sezviri pachena, gully inonakidza yeEurope.
Chiverengero chakakura chekuchengetwa kwevana uye pre-kudzidzisa manejimendi akafukidzwa zvizere nehurumende yeruzhinji. Pane zviyero zvisingaenzaniswi zvekuchengetwa kwevanochengetwa mumba uye mabhenefiti akasarudzika ekuva nevana vanopfuura mumwe - kubva pamari yekuwedzera kudzikisira kuongororwa pamwe nemiganhu yakakosha yekutakura. Vanamai vanokurudzirwa kutora maternity mashizha uye vawane yavo yakazara muripo kwemwedzi mina. Vanababa vanogonawo kutora chero mazuva gumi nemana ezororo rebaba vasina kushomeka kwemubhadharo. Chiremera cheveruzhinji chinowedzera kubhadhara iwe kusvika pa € ​​11 1 muchiitiko chekuti iwe unoda kumbundira mwana. Chaizvoizvo, semukadzi une chisarudzo chakasimba chekuita: enda kubasa uye unounza 846.15-1.500 euro mwedzi nemwedzi kubhadhara kana kugara pamba, kuparadza vana vako kusvika vawana makumi maviri uye kutenderera 2.000 euro yezvo. Parizvino, vakadzi, chii chamungasarudze?
Kadhi rekuFrance rekubatana rinobatana nemuchadenga Vitale - yako yekupinda muchisiko chemubhadharo mishonga, ine mwero (kana yemahara) chiremba akakurudzira mishonga, uye emahara emakiriniki ekuongorora iwe aunogona kukumbirana mumwe mwedzi. Mwedzi wega wega chiyero cheyero chinotorwa kubva pamuripo wako chichiendeswa kuchitoro chako chekurapa, uine chinangwa chekuti unogona kushanyira GP nyanzvi pasina. Pane mukana wekuti iwe unorapwa muchipatara, mhosva huru iwe yaunotarisirwa kubhadhara ndeye 18 € mazuva ese.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeFrance
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muFrance
Kugara nekudyara kweFrance
Bhizinesi muzvinabhizimusi visa / Mvumo yekugara kwenguva pfupi inoshanda kwemakore maviri (inogona kudzoreredzwa ipapo)
Kuchengetedza nguva yeResidency nekudyara kweFrance
Mushure memakore mashanu ehupenyu husina kukanganisa
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari veFrance
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweFrance
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweFrance
Chirongwa chekugara cheFrance chegoridhe chinotarisirwa kune vanhu vane mhando yepamusoro netiweki. Nekuunza mari yakatarwa, iwe nemhuri yako muchawana mvumo yekugara makore gumi, muchinakirwa neFrance yakaenzana. Munzvimbo yeSchengen, iwe unenge uine mukana wakanangana nemahara ekuchengetedza hutano, mikana yepasirose yepasi rose, uye mavhiza akazara ekupinda. Maitiro acho anongova mwedzi miviri, uye haidi chero ruzivo rwe manejimendi, kugara kwekutanga muFrance, hunyanzvi hwemitauro kana kugona kwemuviri, kana zvichidikanwa.
Mhuri inopinda muFrance
Iwe unokwanisa kubva ipapo kuisa nhengo dzemhuri yako muchikumbiro chako pasina imwezve mari. Kune yako French chirongwa, wako mukadzi uye vana vadiki vanokodzera.
Kugara nehurongwa hwekudyara muFrance insite
Maitiro ekunyorera anotora chete 2 mwedzi mushure meizvozvo iwe nehama dzako munowana mvumo yekugara yemakore gumi. Iwe hauna chero chemberi hutungamiri zviitiko, hunyanzvi hwemutauro, kana zvigaro zvakapfuura muFrance. Kunze kwezvo, haufanire kugara muFrance kana wawana mvumo.
Mari inodiwa kuFrance
Iko kudyara kunogona kuitwa wega, pamwe chete neshamwari kana vadyidzani, kana sechikamu chechirongwa chekudyara chinotenderwa nevakuru.
Vanopinda vanofanirwa kuisa inokwana gumi mamirioni euros mumaindasitiri kana ezvokutengeserana zvinhu muFrance. Iwe unogona kuisa mari mukati mako kana kuburikidza nekambani mune makumi matatu muzana emasheya ari ake. Kuwedzera kwekudyara hakudiwe kukwezva nhengo dzemhuri.
Kuwana mvumo yekugara hazvireve kuti iwe unova mutero wechiFrench anogara. Kana iwe ukashandisa yakawanda yenguva yako kunze kweFrance, mari yako yepasi rose icharamba isina mutero uye chete mibairo yekudyara kwako muFrance ndiyo ichashandiswa.
Kutsigira kwevatengi kweResidency nekudyara kweFrance
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents yeFrance uye Residency ne Investment Lawyers nokuti France inopa vatengi uye mhuri dzavo muFrance nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuFrance, kugara nekudyara kubva kuFrance uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira kugari nekudyara kubva kuFrance kana Golden Visa kubva kuFrance kana ugari nekudyara kubva kuFrance kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuFrance, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu France kana kumahombekombe egungwa, zviwanikwa zvevanhu muFrance uye nezvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuFrance nekugara kwechipiri.
Tsigiro Yakakosha yevagari vemuFrance:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeFrance, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeFrance, inokwanisika inivhesitimendi mari yekuenda kune dzimwe nyika vanokumbira kuFrance, inokwanisika Residency nevarairidzi vezvekudyara kuFrance, inokwanisika Kugara nemagweta ekudyara eFrance uye inokwanisika yekufambisa yekufambisa femu yeFrance
Kugara nekudyara kubva kuFrance kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muFrance kuenda ku37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuFrance kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuFrance kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuFrance kuenda ku106 Nyika.
Kugara patsva nezvirongwa zvekudyara kubva kuFrance.
Goridhe visa zvirongwa muFrance kuenda ku37 Nyika.
Citizenship nehurongwa hwekudyara kubva kuFrance kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri mapasipoti mapasipoti kubva kuFrance kuenda ku37 Nyika.
Zvirongwa zveMabhizinesi ekupinda munyika kubva kuFrance kuenda ku106 Nyika.
Kugara neInvestment yeFrance kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muFrance nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka mukudyara muFrance, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweFrance. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa zvevatengesi muFrance vane yakanaka track rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muFrance, kutora zvakanaka kudzoka.
Yakanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveFrance nemari yekudyara muzvivakwa muFrance.
Unoda kuziva - France Residency neInvestment
Kugara neInvestment Gweta kuFrance kuchapa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuFrance. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara zvakare neInvestment kuFrance inosanganisira
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utame kubva kuFrance kana kuenda kuFrance, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Residency nekudyara kweFrance kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeFrance uye kudzora njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kuFrance, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira zvirinani.
Kuti isu tifambire mberi neResidency yako nekudyara kunyorera kuFrance isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera France. Magweta edu akasarudzika eResidency nekudyara kweFrance uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveResidency nekudyara kunyorera kuFrance zvagadzirira, isu tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveFrance.
Kamwe chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweFrance changobvumidzwa, tinogovana newe mashoko akanaka uye tinotanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Residency nemasevhisi ekudyara muFrance kune vakataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi muFrance:
Residency nebasa rekudyara kweFrance hazvipi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovanisa zvombo uye zvombo kubva kana kuFrance.
Residency nezvirongwa zvekudyara zveFrance hazvipi kupihwa kweTechnical surveillance muFrance kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuFrance.
Residency nekutsvaga kwekudyara kweFrance hazvipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana zvematsotsi zviitiko muFrance.
Residency nerutsigiro rwekudyara nokuti France haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muFrance.
Residency nebasa rekudyara kweFrance haisi yemabhizimusi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana zvombo zvenyukireya muFrance.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweFrance haruwanikwe kune vanhu veFrance vanoita mukutengesa, kuchengetedza muFrance, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara nokuti France haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa nokuti France haisi yezvitendero uye masangano avo muFrance.
Residency nebasa rekudyara mu Furanzi haina kupihwa kune vanhu vanobata mune Zvinonyadzisira muFrance.
Kugara Kwedu magweta muFrance haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muFrance.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veFrance neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muFrance kubvumidzwa kunyorera Residency nekudyara muFrance.
Kugara nekudyara muFrance nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muFrance yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muFrance.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa nemutemo zveFrance, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kuFrance inopa mitengo yakachipa, ine chinzvimbo chinobudirira cheFrance.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuFrance kutsigira vatengi uye mhuri dzavo kuFrance.
Zvakaitika Kugara nevekutsvaga mari kuFrance nevamiriri vepamutemo veFrance vachipa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veFrance kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuFrance uye mushure mokubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuFrance
Isu tine ruzivo rwepasi rese muResidency nekudyara kusanganisira France, kubatsira vatengi kubva kuzere pasirese nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuFrance kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuFrance
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweFrance ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veFrance, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweFrance uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza nokuti France
Maitiro Ekubvumidza Kubatira kuFrance
Kwekugara kwenguva pfupi muFrance
Permanent Residence muFrance
Embassies uye ma Consulates eFrance
Kugara nekudyara muFrance uye mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muFrance nekuda kwekukurumidza kana kweramangwana zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuFrance nekudyara mari, isu semumwe wako kuFrance, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda muFrance nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kweFrance, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muFrance, izvo iwe zvausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nevamwe vapi vamazano eFrance vachitigadzira shopu-yekumira yeFrance nenyika dze106.
"Isu takaisa makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi reFrance mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweFrance nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye zvisungo muFrance nepasirese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muFrance kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muFrance yakachipa nesu.)
Chero ani investor anotamira kuFrance angangoda account yako yebhangi muFrance uye account yebhangi yekambani muFrance, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara muFrance
Kana iwe uchida kubvunza muFrance, ye mhinduro dzemadhijitari muFrance senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muFrance kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku France kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga riripo bhizinesi muFrance kutanga pakarepo muFrance.
HR Services muFrance
Our kambani yevashandi muFrance inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muFrance vakasununguka.
Virtual Nhamba dzeNhamba dzeFrance
Bhizinesi foni nhare dzeFrance pamwe ne nhamba dzeFrance Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muFrance
Accounting, kushingairira kwakakodzera muFrance uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muFrance
Setup bhizinesi muFrance
Mushure mekugara patsva nekudyara kuFrance, setup bhizinesi mu Furanzi.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT muFrance
Kugadzira Webhu muFrance
Ecommerce Kuvandudza muFrance
Webhu kuvandudza muFrance
Kubudirira kweBlockchain muFrance
App Kubudirira muFrance
Software Kubudirira muFrance
Magweta e Residency neInvestment muFrance
Isu tinopa Residency zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuFrance uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuFrance, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo kuFrance ine vamiririri vekunze vanoendawo muFrance, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi kushandira ruzivo rweFrance ne kujekesa nzira dzekudyara dzekugadzirisa vanhu veFrance nemhuri dzavo. Yedu Residency neboka rekudyara yeFrance inopa zvakagadziriswa mhinduro dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuFrance, pamvumo yako yekugara muFrance yabvumidzwa.
Simba regweta reFrance rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevamiriri vezvekudyara muFrance. Kana iwe uri muFrance kana kuronga kushanyira France, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kuFrance kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeFrance. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weFrance.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muFrance
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muFrance?
Kugara nekudyara kuFrance, kunogona kutsanangurwa sekuwana, kugara kweFrance kuburikidza nekudyara muhupfumi hweFrance kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuFrance, kugara nehurongwa hwekudyara kweFrance. inotsigirwa nekugara nemabasa ekudyara mari kuFrance, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muFrance, kugara kwakanakisa nemagweta ekudyara muFrance uye kugara kwakanyanya nevanoona nezvekudyara kweFrance, vachishanda zvakanakisa kugara nevamiririri vezvekudyara muFrance, uye mafemu akanakisa ekuona nezvekupinda munyika. muFrance.
Kugara nemabasa ekudyara kweFrance | Kugara nevamiriri vemari muFrance | Kugara nemagweta eInvestment muFrance | Kugara nemagweta ekudyara muFrance | Kugara nevanoona nezvekudyara kweFrance
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muFrance?
Citizenship nekudyara kuFrance, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari weFrance kuburikidza nekudyara muhupfumi hweFrance kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muFrance. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuFrance, ugari nehurongwa hwekudyara kweFrance inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuFrance, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisisa nemagweta ekudyara muFrance, ugari hwakanakisa nemagweta ezvekudyara muFrance uye hunhu hwakanakisa nevanopa mari veFrance. kuva mugari wakanakisa nevamiririri vezvekudyara muFrance, uye akanakisa mafemu ekushambadzira ekupinda muFrance.
Affordable Investor immigration services yeFrance | Vanodhura vanoenda kune dzimwe nyika vanokumbira muFrance | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muFrance | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muFrance | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda muFrance | Affordable immigration law firms for France
Ndeipi tsanangudzo yepasipoti yechipiri muFrance?
Yechipiri pasipoti muFrance, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weFrance kuburikidza nekudyara muhupfumi hweFrance kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuenda kuFrance, yechipiri pasipoti chirongwa cheFrance chinotsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eFrance, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti muFrance, magweta echipiri epasipoti muFrance uye akanakisa echipiri mapasipoti vanachipangamazano kuFrance, vanoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muFrance, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muFrance.
Chechipiri pasipoti masevhisi eFrance | Chechipiri pasipoti vamiririri muFrance | Yechipiri mapasipoti magweta muFrance | Yechipiri mapasipoti magweta muFrance | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuFrance
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muFrance?
Ndarama vhiza muFrance, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara muFrance kuburikidza nekudyara muhupfumi hweFrance kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuFrance, chirongwa chendarama vhiza yeFrance inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi eFrance, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta muFrance, akanakisa egoridhe vhiza magweta muFrance uye akanakisa endarama vhiza varairidzi veFrance, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muFrance, uye akanakisa ekupinda kwevanoona mafemu muFrance.
Goridhe visa services yeFrance | Ndarama vhiza vamiririri muFrance | Magoridhe vhiza magweta muFrance | Magoridhe vhiza magweta muFrance | Goridhe vhiza varairidzi veFrance
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muFrance?
Kuderera kushoma kweResidency nekudyara muFrance iEUR 10,000,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuFrance yeResidency nekudyara here?
Ehe, gweta redu muFrance nevamiriri muFrance vanopa rutsigiro rweKugara nekudyara muFrance.
Kugara nekudyara kuFrance kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuFrance uye Residency nemari yekudyara zvinodiwa kuFrance ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubvunza fizi yeResidency neInvestment kuFrance, isu tinopawo yakawanda yakawanda imwe rutsigiro yeResidency neInvestment mhinduro.
Ndeipi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuFrance kana investor visa kuFrance?
Kugara nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuFrance kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuFrance kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuFrance kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuFrance kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuFrance kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuFrance kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuFrance kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuFrance kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuFrance kubva kuNepal, Residency nekudyara kuFrance kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuFrance kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance nokuti France
Kumbira Yemahara kubvunzana kune yako Residency neInvestment kuFrance
Mazwi akakosha muRudzi rwekugara neInvestment yeFrance
Ita Kuti Pasi Redu Rive Yakakura Zvakare
Ministry of Territorial Kubatana
France Visas (Webhusaiti yepamutemo yekuisa vhiza kuFrance)
OfII (French Immigration uye Citizenship Office)
Ministry of National Dzidzo
URSSAF (Hutano hwekuchengetedzwa kwemagariro
Sarudza Paris Dunhu
National Center yekunze Firms (CNFE)
DIRECCTE (Dunhu redunhu Bhizinesi, Makwikwi, Kuteedzera uye Basa)
CLEISS (Batanidzaison muviri pakati peFrance masangano ezvekuchengetedzeka kwevanhu pamwe nevamwe vavo vekunze)
Ministry of Vashandi
Ministry yeSolararity nehutano
Tsika dzeFrance yebhizimusi
Public Service (Rwepamhepo webhusaiti yeFrance general management)
Link to Dhipatimendi Rekupinda muFrance , ane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Immigration muFrance